Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii degmada Wanle-weyn | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wararkii ugu dambeeyey dagaalkii degmada Wanle-weyn
Rasaas goos goos ah ayaa weli laga maqlayaa gudaha degmada Wanle-weyn ee gobolka Sh/hoose oo saaka aroornimadii uu ka qarxay dagaal u dhexeeya labo maleeshiyo beeleed.
Maleeshiyadka dagaalamay oo weli isku hor fadhiya xaafadaha degmada Wanle-weyn ayaa isweydaarsanaya tacshiirad mararka qaarkood xoogeysaneysa, marna qaboobeysa.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in dagaalka uu markii hore ka bilowday Bar-kontrol oo ku taalla galbeedka degmadaas, uuna markii dambe ku soo faafay gudaha degmada oo xaaladeedu tahay mid kacsan.
Waxaa lagu soo waramayaa in labada dhinac ay dalbanayaan gurmad kala duwan, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalka uu mar kale dib u qarxo
Ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey iney ku dhinteen dagaalkan halka tiro intaas ka badana lagu dhaawacmay, kuwaasoo iskugu jiray dhinacyada dagaalamaya iyo dad shacab ah.
Dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada Wanle-weyn ayaa maanta xaniban ka dib markii uu saameyn ku yeeshay dagaalada saaka qarxay.
Dagaalka ka dhacay degmada Wanle weyn ayaa salka ku haya aargoosi aano qabiil, waxaana horay xal uga gaaray Xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka Somalia iyo waxgarad ka soo kala jeeda labada beelood, welina ma cadda waxaa soo cusbooneysiiyey colaadan saaka dib u bilaabatay.
Dhinaca kale, Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha hoose Maxamed Ibraahim Najax ayaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dirirta isla markaana aan la joogin xiligii si macna dara ah dhiig loo daadin lahaa.
“Waxaan baaq u dirayaa maleeshiyaadka ku dagaalamaya degmada Wanle-weyn inay si deg deg ah u joojiyaan dagaalka, kuwa colaada wada waa lala xisaabtamayaa waqtigii xisaab la’aanta fal dembiyeedyada way soo dhamaatay, Wanle-weyn waxay waligeed ahayd magaalo nabadeed mana la aqbali karo in shacabka korkooda lagu dagaalamo” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose.